Siyaasadda Qarsoonnimada - Shenzhen Hero-Tech Qalabka Qaboojiyaha Co., Ltd - 乐动平台网址,乐动体育app官网入口
Shenzhen Hero-Tech Qalabka Qaboojiyaha Co., Ltd. waxay ku hawlan tahay warshadaha qaboojinta.Waxaan ku dhejineynaa muhiimada ugu sareysa amniga macaamiisha iyo macluumaadka alaab-qeybiyaha.Boggan waxa uu soo bandhigayaa siyaasadahayada ku saabsan ilaalinta macluumaadka shakhsiyeed.
1. U Hogaansanaanta Shuruucda iyo Xeerarka kale
Waxaan raacnaa dhammaan sharciyada qaranka iyo siyaasadaha iyo xeerarka kale ee la xiriira ilaalinta macluumaadka shakhsiyeed.
2. Samaynta iyo Kordhinta Joogtada ah ee Tilmaamaha Maareynta Macluumaadka Shakhsi ahaaneed
Baahida loo qabo ilaalinta macluumaadka shakhsiyeed si fiican ayaa loogu faafiyay shirkadda oo dhan, laga soo bilaabo agaasimayaasha ilaa shaqaalaha ugu yar.Waxaan ilaalinaa oo raacnaa tilmaamaha ilaalinta saxda ah iyo isticmaalka macluumaadka shakhsiyeed.Waxaan sidoo kale ku dadaalnaa inaan hagaajino tilmaamahan si joogto ah.
3. Helitaanka, Isticmaalka iyo Siidaynta Macluumaadka Shakhsi ahaaneed
Waxaan si cad u qeexaynaa isticmaalka macluumaadka shakhsiyeed lagu dhejin karo.Caqabadahan gudahooda, waxaan ku heleynaa, isticmaalnaa oo sii deynaa macluumaadka shakhsiyeed kaliya ogolaanshaha qofka ay khuseyso.
4. Maaraynta Sugan
Waxaan ku dadaaleynaa inaan ilaalino maareynta xogta gaarka ah, waxaana aan dejinay tillaabooyinka lagama maarmaanka ah si aan uga hortagno helitaanka xogta aan la ogolayn, luminta, burburinta, beddelka ama siidaynta.
5. Shaacinta iyo Sixitaanka
Codsiyada shaacinta, tafatirka ama tirtirka macluumaadka shakhsiyeed waa in looga jawaabaa kiis ku salaysan kiis inta la xaqiijinayo aqoonsiga codsadaha.
* Fadlan ku hagaaji wixii su'aalo ah ee ku saabsan xogta shakhsiyeed Shenzhen Hero-Tech Qalabka Qaboojiyaha Co., Ltd. Qaybta Arrimaha Guud.